Iindaba-Ngaba kufuneka ndikhethe umgca wokuvelisa okanye iprojekthi ye-Turnkey yesisombululo se-IV?
Ngaba kufuneka ndikhethe umgca wokuvelisa okanye iprojekthi ye-Turnkey yesisombululo se-IV?
Kule mihla, ngokuphuculwa kwetekhnoloji kunye nemigangatho yokuphila, abantu bahlawula ngakumbi nangakumbi impilo yabo. Ke baninzi abahlobo abavela kwicandelo lamashishini ahlukeneyo, banethemba elikhulu malunga nomzi mveliso wamachiza kwaye bafuna ukutyala imali kumzi-mveliso wamachiza, ngethemba lokwenza igalelo kwimpilo yabantu.
Ke ngoko, ndifumene imibuzo emininzi enjalo.
Kutheni le nto kuthatha izigidi zeedola kwiprojekthi yesisombululo samayeza IV?
Kutheni igumbi elicocekileyo lifuna ukubayi-10000 sq ft?
Umatshini kwincwadana engabonakali ngathi mkhulu?
Nguwuphi umahluko phakathi komgca wokuveliswa kwesisombululo se-IV kunye neprojekthi?
IShanghai IVEN ngumvelisi wemigca yemveliso kwaye yenza iiprojekthi zokujika. Kude kube ngoku, sithunyelwe ngaphandle kumakhulu emigca yemveliso kunye neeprojekthi ezingama-23 zokujika. Ndingathanda ukukunika intshayelelo emfutshane ngeprojekthi kunye nomgca wemveliso, ukunceda abanye abatyali mali abatsha ukuqonda okungcono ngokuzinza kumzi-mveliso omtsha wamayeza.
Ndingathanda ukuthatha ibhotile ye-PP iv isisombululo seswekile umzekelo, ndikubonise into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ufuna ukuseta umzi-mveliso omtsha wamayeza.
Iibhotile ze-pp izisombululo zisetyenziswa ngokubanzi kwi-saline yesiqhelo, iswekile njl njl.
Ukufumana ibhotile yeglucose efanelekileyo, inkqubo imi ngolu hlobo lulandelayo:
Inxalenye 1: Imveliso umgca (engenanto iibhotile, Ukuhlamba-Ukuzalisa-ukutywina)
Icandelo 2: Inkqubo yokucoca amanzi (fumana amanzi ngenaliti kumanzi eteyiphu)
Inxalenye 3: Inkqubo yokulungiselela isisombululo (ukulungiselela iswekile yenaliti emanzini yenaliti kunye nezinto zokwenza iglucose izinto)
Icandelo 4: Ukucoca inzalo
Icandelo 5: Ukuhlolwa (ukuhlolwa kokuvuza kunye neengqungquthela ngaphakathi kokuhlolwa kweebhotile, ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezigqityiweyo zikulungele)
Icandelo 6: Ukupakisha (ukufaka iilebheli, ukushicilela ikhowudi yebhetshi, usuku lokuvelisa, usuku oluphelelwe lixesha, faka ibhokisi okanye ibhokisi eneencwadana, iimveliso ezigqityiweyo kugcino lokuthengisa)
Icandelo 7: Igumbi elicocekileyo (ukuqinisekisa ubushushu bendawo yokusebenzela, ukufuma, ukucoceka njengemfuneko ye-GMP, udonga, isilingi, umgangatho, izibane, iingcango, ibhokisi yokudlula, iifestile, njl.njl.
Icandelo 8: Izixhobo (iyunithi yesiguquli somoya, ibhoyila, chiller njl. Njl.
Kule tshathi, ungabona, umgca wokuveliswa kwebhotile ye-PP, kuphela ziibhloko ezimbalwa kuyo yonke iprojekthi. Umthengi kufuneka kuphela alungiselele iphe granule, emva koko sinikezela ngemigca yokuvelisa ibhotile ye-pp, ukuqonda inaliti yangaphambi kwefom, isitofu sehanger, iphetshana lokuvutha, ukufumana ibhotile engenanto kwi-p granule. Emva koko ukuhlamba ibhotile engenanto, ukugcwalisa ulwelo, ukutywina iminqwazi, yinkqubo epheleleyo yomgca wemveliso.
Kwiprojekthi ye-turnkey, uyilo lwefektri luyilelwe ngokukodwa, indawo eyahlukileyo yeklasi ecocekileyo inoxinzelelo lokwahlulahlula, ngethemba lomoya ococekileyo ohamba kuphela ukusuka kwiklasi A ukuya kwiklasi D.
Nalu ulwakhiwo lweworkshop lwesalathiso sakho.
Umgca wokuveliswa kwebhotile ye-PP umalunga ne-20m * 5m, kodwa umasifundisane wonke weprojekthi ngama-75m * 20m, kwaye kuya kufuneka uthathele ingqalelo indawo yelebhu, indawo yokugcina izinto ezingafunekiyo kunye neemveliso ezigqityiweyo, iyonke imalunga ne-4500 sqm.
Xa uza kuseta umzi-mveliso omtsha wamayeza, kuya kufuneka uthathele ingqalelo le miba ilandelayo:
1) Ukukhetha idilesi yomzi-mveliso
I-3) Imali yotyalo-mali kunye ne-1 yonyaka yokuqhuba iindleko
4) umgangatho we-GMP / FDA
Ukwakha umzi-mveliso omtsha wamayeza, akufani nokuqala ishishini elitsha njengesityalo samanzi amaminerali, isityalo sobusi. Inemilinganiselo engqongqo ngakumbi kwaye imigangatho ye-GMP / FDA / WHO zezinye iincwadi. Izinto zeprojekthi enye zithatha ngaphezulu kwamaqhekeza angama-60 kwizikhongozeli ezingama-40ft, nangaphezulu kwabasebenzi abangama-50, i-avareji yeenyanga ezi-3 ukuya kwezi-6 kufakelo lwesiza, uhlengahlengiso kunye noqeqesho. Kuya kufuneka ujongane nabanikezeli abaninzi, thethana ngexesha elifanelekileyo lokuhambisa ngokweshedyuli yeprojekthi.
Ngaphezu koko, kufuneka kubekho unxibelelwano / imiphetho phakathi kwabaxhasi aba-2 okanye nangaphezulu. Ubeka njani iibhotile kwi-sterilizer ukuya kwibhanti ngaphambi kokubhaliweyo?
Ngubani oya kuba noxanduva lweelebheli ezingabambeki kwiibhotile? Ukuphawula umthengisi womatshini uza kuthi, 'yingxaki yeebhotile zakho, iibhotile emva kokuvalwa kwenzalo azicaba ngokwaneleyo kwelebheli.' Umthengisi weSterilizer uyakuthi, 'ayisiyiyo eyeshishini lethu, ubunzima bethu kukucoca inzalo kwaye sisuse ipyrogen, kwaye siyifumene, kwanele. Ungadinga njani ukuba ubonelele ngenkxaso ye-sterilizer nge-damn bottle shape! '
Bonke abathengisi bathi, zezona zilungileyo, iimveliso zabo ziyafaneleka, kodwa ekugqibeleni, awunakufumana iimveliso ezifanelekileyo iplasma yeglasi. Ke, unokwenza ntoni?
Cask ithiyori- icuba yecask ixhomekeke kwelona phepha lifutshane lomthi. Iprojekthi ye-turnkey yikhaskhi enkulu, kwaye yenziwe ngamacwecwe eenkuni ahlukeneyo.
IVEN Pharmaceutical, njengomsebenzi weenkuni, kufuneka unxibelelane ne-IVEN, sixelele imfuno yakho, enje nge-4000bph-500ml, siya kuyila ikask, emva kokuqinisekisa kunye nawe, iimveliso ezingama-80-90% ziya kuvelisa, iimveliso eziyi-10-20% uya kuphuma ubutyebi. Siza kuhlola umgangatho wepleyiti nganye, siqinisekise unxibelelwano kwipleyiti nganye, senze ishedyuli ngokufanelekileyo, ukukunceda uqonde ukuveliswa kwetyala ngexesha elifutshane.
Ukuthetha ngokubanzi, umgca wemveliso yebhotile, yenye yezona ndawo ziphambili zeprojekthi. Ukuba unamava okulungiselela yonke into, unexesha kunye namandla okusombulula zonke iingxaki ngokwakho, unokukhetha ukuthenga imigca yemveliso ngokwahlukeneyo ngendlela othanda ngayo. Ukuba awunamava, kwaye ufuna ukufumana utyalo-mali kwakhona, nceda uyithembe le nto: Ingcali ilawula imicimbi yobungcali!
IVEN liqabane lakho ngalo lonke ixesha!
Ixesha Post: Aug-03-2021
Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer,